Adobe Acrobat Reader ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Adobe Acrobat Reader ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်
21-03-2007, 12:22 AM
ပို့စ် 173 ခုအတွက် 669 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်တစ်ခုကနေ ဖတ်ခဲ့ရတာပါ ..ဗဟုသုတတစ်ခုပေါ့ .. ဘယ်သူ့ဆီကနေ ဖတ်ဖူးခဲ့တာလဲ မသိတော့လို့ ဒီတိုင်းပဲ ပြောပြလိုက်တော့မယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်သိရှိရတာ ကတော့..PDF File တွေမှာရေးထားတာတွေကို ဘာမှ အင်စတောလ် လုပ်စရာမလိုပဲ PDF ဖိုင်မှာရေးထားတာတွေကို ဖတ်ခိုင်းလို့ ရတယ် ဆိုတာကိုပေါ့ .အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာတွေ ကိုတော့ ဖတ်ပေးတယ်။ စာဖတ်ပျင်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ Feature တစ်ခုပေါ့ဗျာ။ မြန်မာလို ရေးထားတာတွေကိုတော့ သူက မဖတ်နိုင်ဘူးဗျ ..ဟီးဟီး ..ကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ခိုင်းလို့ရရင် ၀တ္ထုတွေဘာတွေ ဖတ်ခိုင်းမယ်ဗျာ။ :P
သူ့ကိုဖတ်ခိုင်းဖို့ Short Cut ကွန်မန်းပေးရမှာကတော့ ...
* Ctrl+Shift+E - to stop ..အဲဒါလေးတွေတင်ပါပဲ ..
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Adobe Acrobat Reader 6.0 or7.0 နှစ်သက်ရာမှာ စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်ထွက်တဲ့ Adobe Acrobat Reader တွေမှာတော့ မသိပါဘူးခင်ဗျာ ..
အော် ..နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ အသံက မြန်လို့ ဖြစ်စေ၊နှေးလို့ဖြစ်စေ ..ပြုပြင်ပေးလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ ဟောဒီကနေသွားလိုက်ပါခင်ဗျ ..
Settings > Control Panel > Speech. ..စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..အော် .နောက်နောင် မြန်မာလိုစာဖတ်ပေးနိုင်တာမျိုး ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လဲ လက်တို့ပြီးပြောကြပါဦးလို့ ..
Last edited by tu tu; 06-09-2008 at 09:48 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, မုန်းလေး, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းအောင်, အပယ်ခံ, ကျော်ထက်ချိန်, AZM, Ei Ei, khant naing, kolatt, myatmonhtwe, thulay2
Visit ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an)'s homepage!
Find More Posts by ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an)
အပေါ်ကစာကို ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေးရမယ်မှန်းမသိလို့ အလွယ်တကူပဲ အထွေထွေ ဆွေးနွေးမှုအောက်မှာ တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ..မော်ဒရေတာကြီးများ ကျွန်တော်မှားနေရင် ပြုပြင်ပေးကြ ..ညွှန်ကြားပြသပေးကြပါလို့ အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အားလုံးကို ရိုသေ လေးစားလျှက် ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 62 ခုအတွက် 211 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by nyeinc8an
Find More Posts by sweet_wine©
21-03-2007, 12:26 AM
ဆွိက တော်တော် အပျင်းကြီးတယ် လို့တော့ ပြောတာပဲ။ ဟုတ်မယ်ထင်တယ် ။ ပေါ်ကိုမလာတော့တာ ။ ခုတော့ ကိုငြိမ်းချမ်းပေးတာနဲ့ တော်တော် ဟန်ကျနေပီလား မသိဘူး။
21-03-2007, 12:27 AM
21-03-2007, 12:29 AM
Hello Ko Nyein Chann! Thz naw Nyi lay. I don't know about it before. It's helpful to us.
21-03-2007, 12:30 AM
Originally Posted by KZaw
ဟုတ်ကဲ့ ..ရပါတယ်ခင်ဗျာ ..ကျွန်တော်လဲ အရင်က မသိပါဘူး။ ကျွန်တော် သိတာလေးကို
ဝေမျှရလို့ တခြားသူတွေလဲ သိသွားရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
21-03-2007, 12:31 AM
ပို့စ် 69 ခုအတွက် 282 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပါဘဲ မောင်ရင် Peace....
Find More Posts by Nalthar
Ctrl + Shift +b	- document တစ်ခုအတွင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ အသံဖိုင်ကိုကြား
ရပါမယ်။ ဥပမာ - ebook စာအုပ်တစ်အုပ်ကို Download ရယူခဲ့ရင် အဲဒီ e-book ရဲ့ မူရင်း website လိပ်စာနဲ့ credits များကိုကြားရပါမယ်။
Ctrl + Shift + C	- အသံဖိုင်တွေမှာရှိတဲ့ Resume ခလုတ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ဆင်တူပါတယ်။
Ctrl + Shift + e	- မကြားလိုတော့တဲ့ အခါမှာ ပြန်လည် ပိတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
16-09-2008, 03:40 PM
ပြန်စာ - Adobe Acrobat Reader ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်
ကိုငြိမ်းချမ်းပြော သလို ကီးတွေ နှိပ်ကြည့်ပါတယ်။ မရပါဘူး။ Acrobit 8.0 မှာမရတာလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ။
Find More Posts by roselele
ပို့စ်9ခုအတွက် 21 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
THANK YOU ALOT FOR THIS POST.
အကိုရေ ။ ကျေးဇူးတင်စကားဘဲ ပြောမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ရင် ပို့စ်တင်မယ့်အစား thanks ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေး နှိပ်ပေးပါလား ။
Last edited by Aung Aung; 17-09-2008 at 02:24 PM..
Visit www.thuratun.co.nr's homepage!
Find More Posts by www.thuratun.co.nr
13-10-2008, 06:09 PM
တည်နေရာ: moMenT @ HELL
ပို့စ် 37 ခုအတွက် 75 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဘာသံမှာကြားဝူးဗျ .. ကျွန်တော့်နားပဲမကောင်းတာလား ..
လုပ်ပါအုံးဗျာ .. ဘာများမှားပါလိမ့် ...
Find More Posts by ^Dragon^
အကိုတို့ ဖတ်ခိုင်းတာ မြန်မာစာအုပ်လား၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လား ။ သူက အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဘဲ ဖတ်နိုင်သေးတာနော်။ မြန်မာစာအုပ် မပါဘူးခင်ဗျ ။
13-10-2008, 06:46 PM
ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ပဲဖတ်ခိုင်းတာပါဗျာ ..
အကိုတို့ ရော ရကြလားဗျ ..???
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ^Dragon^ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-02-2009, 03:11 AM
ကျွန်တော် ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း ကို မသိဘူး ဗျ ....ဖတ်ချင်တဲ့ စာ ကို စလပ်ချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမလား....ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ..ကျွန်တော် မရဘူးဗျ...ငတုံး လို့ ပြောလဲ ခံလိုက်ပါတော့မယ် အဟီး....
ဆွိ ကတော့ ရတယ်လို့ပြောတယ် သူ ဘယ်လိုရလဲ ပြောပြစေချင်တယ် ...ပစ်မထားကြပါ နဲ့ ဗျာ အဟင့်...
Find More Posts by စစ်မင်းသန့်
15-02-2009, 09:00 AM
ကို စစ်မင်းသန့် ရေ....ဒီလိုလုပ်ပါဗျာ....
Acrobat Reader ကိုဖွင့်ပြီးတော့ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ file ကိုဖွင့်လိုက်ပါဗျာ....ပြီးရင် View --> Read Out Loud --> Active Read Out Loud (Shift + Ctrl + Y ) ကို click ပေးပြီးရင် ဖတ်လို့ရပါပြီဗျာ.....ကိုဖတ်ချင်တဲ့ စာမျက်နှာကိုလည်း ရွေးပြီးတော့ဖတ်လို့ရကြောင်းပါဗျာ.......အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျာ.......
လမ်းပြကြယ်, ကျော် ခေါင်, decemberdec, soehtetpaing
13-03-2009, 06:08 AM
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ. အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။ကံဆိုးချင်တော. ကျွန်တော.စက်က adobe acrobet7ကို run လို.ရဘူးဗျာ။သူငယ်ချင်းစက်မှာတော. ရကြောင်းပါ ခင်ဗျာ။
ခု မှ သိရလို စမ်းကြည့်ဦးမယ်ဗျို့
မလာတာကြာပေါ့ ဘာမှကို မသိတော့ ပါဝူး
Acrobat Reader ခုနစ် မ၇ှီလို့ ပါဗျာ.... အဆင်မပြေဘုးဖြစ်နေတာ..... ကူင်္ညီကြပါဦး
ပို့စ် 330 ခုအတွက် 2,018 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ကလင့်မှာ သွားယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။ Adobe Reader 7.0 ရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ blackNwhite အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော်အကူအညီတခုတောင်းချင်လို့ပါ adobe reader 9.0 သုံးနေပါတယ်။ အဲ့ဒါ adobe reader9.0 ထဲက စာမျက်နှာတွေကို (ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်ပုံစံ) ခါးချုပ် ချုပ်လို့ရတဲ့ စာအုပ်ပုံစံ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ထုတ်ရမလဲဆိုတာ ကူညီပေးကြပါလားခင်ဗျာ။
adobe acrobat, software howto
MS Word , Excel , Powerpoint , Access , Front Page , Adobe Acrobat , PageMaker တို့ကို မြန်မာလို လေ့လာရအောင် phoelapyaee E-Books & Tutorials 109 16-10-2014 06:27 AM
Adobe Flash Professional CS3 KTM Softwares များ705-10-2010 11:13 AM